192.168.8.1 - Dzivirira Yako WiFi Network
Dzivirira Yako WiFi Network inodikanwa kana zvasvika pakuchengeta kunze kwevanopinda & kuchengetedza yako data.
Maitiro Ekudzivirira Wako Wi-Fi network
To Dzivirira network yako yeWi-Fi inozvichengetedza kubva kune vanobiridzira, pane matanho mazhinji aunofanirwa kutora:
1.Gadzira default username & passkey
Chekutanga uye chakakosha chinhu chaunofanira kuita Kudzivirira Yako WiFi Network ndeyekushandura default usernames & mapassword kune chimwe chinhu chakawedzerwa kuchengetedzwa.
Wi-Fi vatengesi vanogovera otomatiki zita rekushandisa & passkey kunetiweki & hackers vanogona kungo tsvaga iyi default passkey online. Kana ivo vakawana mukana kune iyo network, vanogona kushandura iyo yekupfuura kune chero chavanoda, kiya mutengesi kunze uye vatore network.
Kuisa mazita evashandisi & mapassword zvinoita kuti zvinyanye kuomarara kune vanopinda kuti vawane iyo Wi-Fi iri & kuwana mukana kune network. Vabiridzi vane zvigadzirwa zvepamusorosoro kuyedza mazana ezvingaitika passkey & username mapoka, saka zvakakosha kusarudza password ine simba iyo inosanganisa zviratidzo, mavara, & nhamba, kuti iite kuomarara kusarudza.
2. Chinja pane Wireless Encryption Network
Encryption ndeimwe yedzakanakisa nzira dzekuchengetedza yako network data. Encryption inoshanda nekusanganisa yako data kana izvo zvemukati meseji kuti irege kududzirwa nevekubiridzira.
3. Uchishandisa Virtual Private Network VPN
Iyo Virtual Yakavanzika Network iri network iyo inobvumidza iwe kuti ubatanidze pamusoro peiyo isina kunyorwa, isina kuchengetedzwa network nenzira yega. VPN inonyora yako data kuitira kuti iyo yekubira isakwanise kutaurirana zvaunoita online kana kwaumire. Pamusoro pe desktop, inogona zvakare kushandiswa palaptop, foni kana piritsi. Zvakare nedesktop, inogona kutoshandiswa pafoni, laptop, kana piritsi.
4. Bvisa Wi-Fi Network paunenge usiri pamba
Inoita senge iri nyore asi imwe yedzakareruka nzira dzekudzivirira ako epamba network kubva pakurwisa ndeye kuidzima kana iwe usiri pamba. Yako Wi-Fi network haidi kushanda maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki. Kudzima yako Wi-Fi iwe uchiri kure nemba kunodzora mikana yevanobiridzira vane hungwaru kuyedza kupinda mukati medandemutande iwe uri kure nemusha.
5. Chengeta router software yakagadziridzwa
Wi-Fi software inofanira kuve yemazuva ano kuchengetedza netiweki chengetedzo. Iwo mafirmwares eva routers senge chero imwe mhando yesoftware inogona kusanganisira kufumurwa kunoitwa nevasori vanoda kushandisa. Mazhinji mairaira haazove nesarudzo ye auto-yekumisikidza saka iwe uchazoda kuti mumuviri kugadzirisa software kuti uve nechokwadi chekuti network yako yakachengetedzwa.
6. Shandisa Firewalls
Maximum W-Fi ma routers ane yakavakirwa-mukati network firewall iyo inoda kuchengetedza Broadband network uye kutarisa chero network inorwiswa kubva kune stalkers. Ivo vanozotove nesarudzo yekumiswa saka zvakakosha kuti uongorore kuti yako router firewall yakavhurwa kuti uwedzere yakawedzera dziviriro dura kune yako chengetedzo.
7. Bvumidza Kuchenesa kweMAC Kero
Mazhinji mabandara ebhendi anosanganisira yakasarudzika inozivikanwa seye chaiyo Midhiya Access Kudzora (MAC) kero. Izvi zvinotsvaga kusimudzira chengetedzo nekutarisa huwandu hwemagadgetti ayo anogona kubatana kusvika kunetiweki.